Allgedo.com » 2012 » November » 14
Home » Archive Daily November 14th, 2012
DHAGAYSO: Ra’isul Wasaaraha oo ka hadlay Maamul u samaynta Jubooyinka
Ra’isul Wasaaraha dowlada Soomaaliya Dr. Cabdi Faraax Shirdoon (Saacid) ayaa si adag kaga hadlay arimaha maamul u samaynta goboladda Jubooyinka. Waxaa uu sheegay in maamul u samaynta gobolada dalka ay tahay howl u taal shacabka degan gobolada, dowlada Soomaaliyana ay gacan ka siinayso. Dr. Saacid ayaa si gaar ah kaga hadlay xaalada Maamul u samaynta Jubooyinka oo muddooyinkaan danbe uu khilaaf...
Wafdi ka socda dowladaha Turki iyo Iiraan oo Muqdisho soo gaaray
Waxaa Goordhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kasoo dagtay wafdi caalami ah oo ka kala socda dowladaha dalalka Turkiga iyo Iiraan. Wafdi balaaran oo ka socda dowladaha Iiraan iyo Turkiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kaga hortagay masuuliyiin katirsan dowlada Soomaaliya oo soo dhaweysay. Wafdiga ayaa waxaa kala hogaaminaya wasiirada arimaha dibada dalalka Turkiga iyo Iiraan , waxaana...
Kulan lagu ansixin lahaa Golaha Wasiirada oo dib u dhacay
Mudanayaasha barlamaanka Soomaaliya ayaa maanta gaaray xarunta golaha shacabka halkaas oo lagu waday in lagu dhaariyo golaha wasiirada. Xubnaha golaha Wasiirada ayaa iyagana qaarkood ku sugnaa hoolka, hase ahaatee mar danbe ayaa lasoo gaarsiiyay inuu baaqday kalfadhigii lagu dhaarin lahaa xukumada. Wararka ayaa sheegaya in sababta loo baajiyay dhaarinta golaha wasiirada ay tahay iyadoo magaalada Muqdisho...
Faah Faahin kasoo baxaysa dagaal ka dhacay magaalada Kismaayo
Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in halkaas xalay ay ka dhaceen dagaalo qasaaro gaystay. Dagaaladan ayaa ka danbeeyay kadib markii ciidamada Shabaab ay weerar ku qaadeen qaar kamid ah xaafadaha magaalada Kismaayo. Rasaas xoogan ayaa laga maqlayay gudaha magaalada, waxaana lasoo sheegayaa in laga cabsi qabo in dagaaladaas ay dad shacab ah waxyeelo kasoo...
Wasiirka cusub ee Warfaafinta oo ka hadlay dilalka kadhanka ah saxaafada
Dilalka loo gaysanayo saxafiyiinta ayaa ah mid sii kordhayay Waayadan, iyadoona aysan jirin cid si gaar ah ugu howl gashay wax ka qabashadeeda. Isagoo la hadlayay qaar ka mid ah saxaafada ayaa Wasiirka cusub ee wasaarada Warfaainta xukuumada Soomaaliya waxaa uu shaaca ka qaaday inuu yareyn doono Tacadiyada loo geyst0 saxafiyiinta ka howlgal Soomaaliya. Wasiirkan cusub C/laahi Ciil Mooge Xirsi oo ah...